Posted by မိုးစက်ပွင့်လေး at 2:29 AM3comments
RECYCLER ဗိုင်းရပ်ကို ဖြေရှင်းခြင်း ...
ဘလော့ကိုမဝင်ဖြစ်တာကြာတော့ ဘာရေးရမယ်လဲမသိဖြစ်နေတယ်လေ.. ဟဲဟဲ...
ကြုံရာလေးပါးငါးပါးပဲတင်လိုက်ပါတယ်.. သိပြီးသားဖြစ်ရင်လဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့လေ..
သည်းခံပီးတော့ပဲ အားနာပါးနာလေး ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြပေါ့နော်....
Pen Drive တို. Hard Disk ထဲမှာတို. RECYCLER ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်က ကြိုပြီးနေရာရာထားရင် ယူထားနေလောက်ပါပြီ။ အဲဒီ RECYCLER ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်က autoun.inf ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးနဲ.အတူ Drive တွေကို အကုန်လုံးကို ကူးစပ်တာ အရမ်းမြန်လွန်းပါတယ်။ အဲဒီ RECYCLER ဆိုတဲ့ဖိုင် Delete လုပ်လို.လည်းမရပါဘူး... ကဲ..ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...:PPPPPPPPPPPP
ဘာမှမပူပါနဲ.။ အောက်ကလိပ်စာလေးကိုသွားပြီး unlocker 1.87 Free Version လေးကို ဒေါင်းလော့ဆွဲပါ။
ပြီးရင်တော့ ဖျက်လို.မရတဲ့ဖိုင်တွေကို Unlocker က ဘယ်လို Action မှာ Delete လိုရွေးပြီး Ok လို.သာပြောပေးလိုက် အဲဒ RECYCLER ဗိုင်းရပ်ပြုတ်ပါ ထွက်သွားလိမ့်မယ်။
Posted by မိုးစက်ပွင့်လေး at 8:40 PM 1 comments
ღღ တောင်းဆု ღღ
Posted by မိုးစက်ပွင့်လေး at 5:49 AM3comments
Posted by မိုးစက်ပွင့်လေး at 2:47 AM2comments
Posted by မိုးစက်ပွင့်လေး at 2:36 AM 1 comments
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုပြင်ကြည့်ရအောင်......
မိုးစက်လေး သိသလောက် website တွေ ပြောပြမယ်နော်....ကျန်နေသေးရင် သူငယ်ချင်းတို့က ထပ်ဖြည့်ပေးပေါ့..........
Posted by မိုးစက်ပွင့်လေး at 4:38 AM0comments
အချိန်ကိုအသုံးချခြင်းနှင့် ဖြုန်းတီးခြင်း ဆိုတာလေးကို တင်ပြမို့ ပါချင့်... :PPPPP
အားနာပါနာနဲ့ ပဲ နားထောင်တွားကြပါနော်...
အချိန်သည်ငွေပင်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကို ငွေနှယ်ဖြုန်းတီး၍မရ။
ငွေတကျပ်ကို မလွှင့်ပစ်နိုင်သလို အချိန်တနာရီကိုလည်းလွှင့်ပစ်၍မရ။ အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းသည် စွမ်းအင်ကိုဖြုန်းတီးခြင်း၊ ရှင်သန်မှုကိုဖြန်းတီးခြင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တကို ဖြုန်းတီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းသည် မကောင်းသူများ နှင့် ပေါင်းသင်းသလို အကျင့်ဆိုးများကို လက်ခံသလိုမျိုးဖြစ်တယ်။
ပြန်မရတော့တဲ့ အခွင့်အလမ်းများကို စွန့့် ပစ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သင်၏အနာဂတ်သည် အချိန်တွင်တည်ရှိနေသဖြင့် အချိန်ကို မည်သို့သုံးမည်ဖြုန်းမည်ကိုဂရုစိုက်ပါ။
အချိန်သည် လူတစ်ယောက်အား သူ့ကိုသူ အသုံးဝင်သူဖြစ်ရန် ၊ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူဖြစ်စေရန်၊
ပျော်ရွှင်သူဖြစ်စေရန်အတွက် ပင်ကိုအသိတရားဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း၊ တိုးတက်ရာတိုးတက် ကြောင်းကို မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေခြင်း၊ မြူဆွယ်မှုများကိုငြင်းပယ်ခြင်း၊သာယာမှုများကို ပစ်ပယ်ခြင်းတို့ဖြင့် ပြီး မြောက်စေပါသည်........
Posted by မိုးစက်ပွင့်လေး at 5:55 AM2comments